Mihevitra Hanao Fampihaonana Manerana Ny Firenena Ny Ao Zeorzià · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Mey 2016 6:36 GMT
Fotoana fampakarambady tao Tbilisi renivohitr'i Zeorzià. Sary Wikipedia
Lahatsoratra fiarahana miasa avy amin'ny EurasiaNet.org ary nosoratan'i Giorgi Lomsadze. ity manaraka ity. Naverina navoaka rehefa nahazoana alàlana.
Nambara tao Zeorzià ho toy ny vahaolana tsara indrindra amin'ny “olan'ny” maha-tokantena ao amin'ity firenena any Kaokazy Atsimo misy vahoaka 3,7 tapitrisa ity ny fanisàna faobe ireo tovolahy sy tovovavy tokantena afaka mirotsaka amin'ilay drafitra ho fampihaonana atao manerana ny firenena.
Inoan'ireo olompirenena nandray andraikitra avy amin'ilay fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa ara-bola ao Zeorzià, ny Tahirimbola ho Fampandrosoana Ny Isan'ny Mponina (GDF) fa ny fitontongan'ny isan'ny fanorenana tokantrano sy ny zaza ateraka dia nitondra io firenena bitika tao amin'ny Firaisana Sovietika fahiny io ho amoron'ny tevan'ny “loza mahatsiravin'ny isan'ny mponina.” Ary dia ity ny Tinder, ilay fampiharana hifankahafantarana, ary tsy mbola hanitsy/hanamboatra. Hoy ry zareo, efa miala any ny tolotra fampihaonana izay ny governemanta no manohana azy.
“Ho raisinay daholo ny isan'ireo tokantena, mananontena, nisaraka ary dia ho ampidirina anaty angondrakitra iray ny mombamomba azy ireny,” hoy ny nambaran'i Davit Khizanishvili, filohan'ilay tahirimbola, tamin'ny volana lasa. Tamin'ny alàlan'ny masoivoho iray natokana ho amin'io raharaha io, efa nanomboka sahady naka ny mombamomba ireo tokantena ao Zeorzià ilay fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa, tamin'ny fakàna am-pitandremana fatratra ny antsipirihany mombamomba ny olona tsirairay, toy ny “lanja, halavàna, tononandro.”
Nahazo ny tsodranon'ny Fiangonana Ortodoksa Zeorziàna ny GDF, dia ilay fiangonana isan'ny manana ny toerany indrindra ao amin'ny firenena, ary nihetsika haingana ireo parliemantera nanao fanomezana avy amin'ny karaman'izy ireo.
Toy ny any an-kafa ao Kaokazy Atsimo, maro ao Zeorzià no mijery ny fanorenana tokantrano sy ny fiterahana ho toy ny andraikitra masina, saingy marobe ireo Zeorziàna no tsy babon'ity hevitra ho fampihaonana manerana ny firenena ity. Ny fomba nanolorana azy, tsy misy na iray aza itoviany amin'ilay fanentanana mahafinaritra tany Danemarka “Ataovy izany ho an'i Danemarka, Ataovy ho an'i Neny”, izay nandrisika ireo Danoà mpivady mba haka fialantsasatra hahafahany miray sy manao izay haha-bevohoka azy. Miaraka amin'ilay teny fanevany manjavozavo, ilay an'ny Zeorziàna dia mitovitovy kokoa amin'ilay hatsikana iray feno hadisoana tsy faka tàhaka tamin'ny 2015, The Lobster. Ao anatin'izany lahatsary izany, entina ho any amin'ny hotely ireo olona tokantena, ka any no itadiavan'izy ireo ao anatin'ny 45 andro izay olona mahafatifaty azy, na avadika ho toy ny biby ny endriny.
Tena nataon'ilay fanentanan'ny GDF ho toy ny olona tsy misy fotony ireo Zeorziàna sasany. Hita tanatin'ny fanehoankevitry ny olona, nangonin'ny gazety mpiseho isanandro Rezonansi, ireo ahiahy hoe ho ampandoavina hetra ny tokantena na mety hiatrika fanorenana tokantrano an-terisetra.
Tsy hoe niteraka ahiahy fotsiny ilay tolokevitra, fa koa hala-tàhaka mahatsikaiky. “Zavatra mety hiseho ny hoe tsy faly amin'ilay vady natolotra azy ravehivavy, saingy tsy maintsy iaretany ny zavatra rehetra noho ny tombontsoam-pirenena,” hoy ny nosoratan'ilay gazety mpananihany ety anaty serasera Chiti, endrika Zeorziàna ho an'ny The Onion. Anaovan'ilay gazety vazivazy ny hoe ho ezahan'ilay Tahirimbola atao ny hanambatra ireo olona tsara tarehy amin'ireo tsy mahasarika mihitsy, amin'izay mba ho eo anelanelany ny fijery ny zanak'izy ireo.
Mifandray amin'ilay lehilahy nanao azy ny fisalasalàna momba ilay hevitra, Levan Vasadze lehilahy mpandraharaha sy lehiben'ny fampihaonana, filohan'ny filankevi-pitantanan'ny GDF ary nahazo diplaoma avy amin'ny sekoly ambonin'ny fandraharahana, Anjerimanontolon'i Emory. Misaina hatrany sy voasariky ny nentin-drazana (mankafy ny chokhas), i Vasadze, 45 taona, dia manana fikambanana iray sy tanjona mitovy amin'ireo an'ny GDF.
Fantatra amin'ny tolony manohitra ny zon'ny pelaka sy ny fanalàna zaza izy. Ny fomba fikabariny sy ny vavabe fanaony manohitra ny fanalalahana dia nanome fiaingàna ho an'ny aterineto sy ny fahitalavitra
Amin'izao fotoana izao, ny mivezivezy mameno ny serasera dia ny famelabelaran'i Vasadze manohitra ny fanalalahana ara-kolontsaina sy sosialy. “Ho antsoiko hoe homo urbanicus hedonicus ireny karazany ireny, na homo urbanicus, na angamba fotsiny hatao hoe urbano-hedonicus,” hoy ny nambarany tao anaty tafa iray tany am-piandohan'ity taona ity. “Ao anatin'ny hatanoràny, mihevitra fa faly ny homo urbanicus, saingy nofinofy atosiky ny hormonina fotsiny izany…avy eo ny homo urbanicus hedonicus lasa “sadomasochistic“, olona tratry ny rarintsaina noho ny maha-irery azy, tezitra ary tsy tohinina.”
Manambady ary niteraka enina, ny fialamboly no hitan'i Vasadze fa fanefitra ho an'ireny aretina ireny.
Lazain'ny GDF fa tsy ao an-damosin'ny fanentanana fanisàna ataony mihitsy i Vasadze, saingy marobe ny Zeorziàna tokantena no matahotra hoe ho avy handondòna ao am-baravaran-dry zareo miaraka amin'ny datin'andro fampihaonana efa nomaniny samirery i Vasadze, miakanjo ilay ankanjo nentin-drazana ahafantarana azy iny.